Ikharaveni sinombuki zindwendwe onguChloé
Indlu yeendwendwe yase-Aurinko
Ngokucokisekileyo, ikharavani enikwe ivintage entliziyweni yeCathare Pyrenees: umbono ophefumlayo wePiedmont yasePyrenean, amahlathi, amathafa kunye nokutshona kwelanga.
Ikharavani inebhedi ephindwe kabini kwigumbi elincinci elahlukileyo, igumbi lokuhlala elitofotofo elinomabonakude, kunye nekhitshi elixhotyisiweyo (i-microwave, i-induction hob, i-mini-dishwasher, i-toaster, iketile yombane kunye nomatshini wekofu we-Senséo).
Iindwendwe zinokungena ngokungenamda kwitubhu enkulu yangaphandle yaseScandinavia eshushu kunye nebarbecue.
Igadi yabucala yangaphandle ejikeleze ikharavani, ibhafu eshushu yaseScandinavia (eneejethi zokuphulula kunye nezibane ezinemibala ekhokelwayo).
Ishawa yaseTaliyane yangaphandle (ekhuselweyo) kunye nendlu yangasese, itafile yegadi kunye nebarbecue.
Isidlo sakusasa selizwekazi sibandakanyiwe kwindawo: isonka esenziwe ekhaya kunye ne-brioche, amaqanda enkukhu yethu, ikofu, iti, ijam, ibhotolo, iyogathi, itshizi kunye nenyama ebandayo.
Iindlela ezininzi zokuhamba zifikeleleka ngokuthe ngqo ukusuka kwindlu yeendwendwe (amakhowa amnandi anokufumaneka kwihlathi elikufutshane ukusuka ngoJulayi ukuya kuNovemba!), Iingxangxasi ezixhotyiselwe ukunyuka (inqanaba leengcali le-E4-E8), amabhodlo enqaba ephakathi kunye neengxangxasi ezidumileyo zaseRoquefort. zonke zifikeleleka ngokuhamba umgama (<3km).
Izinto ezingabonakaliyo kwiindawo ezingqongileyo: inqaba yaseFoix kunye neMontségur, izixeko zamandulo zaseMirepoix kunye neCarcassonne, imiqolomba (iNiaux kunye neLombrives), iindawo ezininzi ze-prehistoric kunye nemisebenzi ye-thermal.
Iindawo zokuhlambela: Lac de Montbel, Mondély ...
Ngaphandle kokulibala iingxangxasi ezidumileyo zeRoquefort-les-cascades, zifanelekile ukusetwa kwi-Lord the Rings!
Umbuki zindwendwe ngu- Chloé
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Roquefort-les-Cascades